The Rohingya News Bank : ပြင်သစ်
Showing posts with label ပြင်သစ်. Show all posts
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ (နိုဝင်ဘာ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၇)
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်လူနည်းစုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခြေအနေဟာ သိပ်ကို စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကောင်းဆဲရှိပြီး ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်သစ် အစိုးရဟာ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၊ အထွေထွေညီ လာခံ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီတို့ အပါအဝင် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နေ တယ်လို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ ကြာသပတေး နေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ဗွီအိုအေ, ပြင်သစ်, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြင်သစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့
7 DAY DAILTY
By ထက်အာကာကျော် On
No. 2080, Saturday, March 9, 2019
‘မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပိုမိုနားလည်သိရှိစေရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်း များ’ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတစ် ရပ်ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့၌ကျင်း ပခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနကယမန်နေ့တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
Labels: 2019, mm, စိန်ခေါ်မှု, ပါရီ, ပြင်သစ်, မြန်မာနိုင်ငံ, အခွင့်အလမ်း